အဖွူရောငျ အိမျလေးတလုံး: January 2010
အင်း အမှန်တော့ ကိုယ့်အိမ်ကို မရောက်တာ ကြာပေါ့ ၊၊ ဘယ်လို ၀င်ရပါ့လို့ သော့လေးတောင် မေ့တော့မလို့ P(: အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့ပါ လို့တော့ မညည်းချင်တာအမှန် ၊၊ လူတိုင်းမှာက ကိုယ့်အရေးတွေနဲ့ ကို ၊၊ လူတိုင်း က အလုပ်ရှုပ်နေကြတာ ဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်း သိပ်ညည်းလို့ မကောင်း တာတော့ ဘာသာနားလည်ပါတယ် ၊၊ အမှန်တိုင်းပြောရရင် စာတွေလည်း လိုက်ဖက်ချင်သလို စာအသစ်တွေလည်း ရေးတင်ချင်ပါတယ် ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အဆက်ပြတ်နေပါတယ် ၊၊ သူတို့အိမ်တွေလည်း မရောက်တာ ကြာပေါ့ ၊၊ ကိုယ့်ကို မေ့သွားမှာ လည်း စိုးပါတယ် P(:
အခုလတ်တလော သတင်းကောင်းလေး ကြားရတာကတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အမျိုးသမီး PR ရသွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလေး ၊၊ သူ့အတွက် ၀မ်းသာရသလို အခြား စောင့်နေဆဲ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်လည်း ၀မ်း သာ ရပါတယ် ၊၊ အခုချိန်ထိ PR တွေ ပေးနေသေးတယ် ဆိုတာလေး သိရတာပေါ့ ၊၊ အင်း နောက်တစ်ခုကတော့ သတင်းမကောင်းလေး ၊၊ အလုပ်လာရှာတဲ့ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း အလုပ်တော့ ရပါရဲ့ တင်လိုက်တဲ့ Spass က ရီဂျက်တက်တဲ့ ၊၊ အရည်အချင်းလား အင်း သူ့ဘွဲ့ က မြန်မာပြည်မှာတော့ အမြင့်ဆုံး ပါပဲ ၊၊ လုပ်သက်လား ကျောင်းပြီးတာ ကြာပေါ့လေ ၊၊ အချို့သူ့ အတန်းဖေါ်တွေဆို ဒေါက်တို ကြီးတွေ တောင် ဖြစ်နေပေါ့ ၊၊
စိတ်ချမ်းသာစရာလေးကတော့ ကျွန်တော့် ဖြေရှင်းနေတဲ့ Lee Project လေး ( လူမှု ဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ် တစ်ခုပါ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် Mr Lee လေ P: ) က ရလဒ်ကောင်းလေးတွေ မြင်နေရလေရဲ့ ၊၊ ရှေ့လျှောက် ကောင်းဖို့သာမို့ ကိုယ့်ဖက်က ကျိုးစားဖို့ပဲ ၊၊ စိတ်ညစ်စရာလေးကတော့ အချိန် မလောက်ငှတာပဲ ၊၊ တကယ်ပါ ၊၊ုအဟုတ်မလောက်တာ ၊၊ ဘယ်လို ကုန်နေမှန်းကို မသိတာ ၊၊ ဒီလဆို လစာ ဘယ်လို ၀င် လာမှန်းကို မသိတာ ၊၊ အရင်ကဆို မျှော်နေကြ ၊၊ ဒီလဘယ်လို ကုန်မှန်းကို မသိ လိုက်တာ ၊၊
စိတ်မကောင်းတာလေးက အိမ်ကို ပေးဖို့ ၀ယ်ထားတဲ့ ပစည်းတွေ ပေးဖို့ အဆင်မပြေတာ ၊၊ တော်ရုံဆို လူကြုံ မပေးတဲ့ ကျွန်တော် အားကြိုးမာန်တက် လူကြုံကောင်းလို့ ၀ယ်မိကာမှ အဆင်မပြေဖြစ်ရတယ် ၊၊ အိမ်ကိုလည်း ဖုန်းက ဆက်ပြီးပြီမို့ မျှော်နေမယ့် အမေ့အတွက်ပဲ စိတ်မကောင်း ၊၊ အင်း သူကမှာတာ မဟုတ်တော့ တော်သေး ရဲ့ ၊၊ ကိုယ်ဘာသာ လူကြုံ ကောင်းလို့ ၀ယ်ပေးလိုက်တယ် လို့ ပြောထားတာ ဆိုတော့ အင်း ဆိုပြီးပဲ .... ကျေနပ် လိုက်ရပါတယ် ၊၊ တက်နိုင်ဘူး ရယ် ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြစ်ရင် ပြန်ဖြစ် မဟုတ်တော့လည်း ဒေါ်သန်းနုပေါ့လေ ၊၊ တော်ပါပြီ နောက်များတော့ လူကြုံရယ်လို့ မျှော်ကိုးပြီး မ၀ယ်လိုတော့ပြီ ၊၊ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်ခါလား ပို့ဖူးတယ် ၊၊ အိမ်ကလူတွေ အလုပ်ရှုပ်လို့ တော်ရုံတော့လည်း မပို့ပါဘူး ၊၊ သူတို့ ဖုန်းဆက်လို့ ဘာပေးလိုက်မလဲ မေးတဲ့ အခါ မျိုးသာ သေချာမေးပြီး ပေးတက်တာ ၊၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ၊၊ ပြန်တဲ့အခါ ပေးချင်သူ မှာချင်သူက များသားလား ၊၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း နည်းနည်းလေးမှ သူများအငြို အငြင် မခံချင်သမို့ ခက်တော့လည်း ခက်သား ကိုယ့်စိတ်ကိုယ့်စိတ် ၊၊
စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတစ်ခုက အခုတလော အသစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါင်းရတာ အဆင်ပြေတယ် ၊၊ ကိုယ့်အပေါ်လည်း ကောင်းကြတယ် ၊၊ စကားလုံးတွေကို ခံစားတက်တဲ့ အသံတွေကို ဖတ်တက်တဲ့ ကိုယ့် အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်မို့ပါ ၊၊ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ပြေ နေတာလေး တစ်ခုနဲ့တင် နည်းနည်း တော့ သက်သာတာပေါ့ ၊၊ ကိုယ့်ပြသနာက အလုပ်ထဲမှာ မဟုတ် ၊၊ တော်သေးသည် မှတ်ရမည် ၊၊
ငါ့မှာ အချိန်မလောက်ဘူး လို့ ညည်းတော့ အလုပ်ထဲက မလေးရှား သူငယ်ချင်းက Who ask you to go and do ? who ask you ??? who ask you ??? တဲ့ ၊၊ အင်းကိုယ့် ဒေါသနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့လည်း ငြိမ်နေပေါ့ ၊၊ မင်းကလည်းကွာ နည်းနည်းလောက်တော့ အားပေးပါလား ဆိုတော့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက အဲဒီလို အားပေးနေရင် မင်း ပျင်းသွားမှာပေါ့တဲ့ ၊၊ မင်းအချိန်ပိုတွေ လိုချင်ရင် မင်းရနေပြီပဲ နောက်တစ်ခုကို မင်းလိုချင်တာမဟုတ် လား မင်း ကျိုးစားပါ တဲ့ ၊၊ အင်း ဟုတ်ပ
စိတ်မကောင်ထပ်ဖြစ်မိတာက အွန်လိုင်းပေါ်က စကားအခြေအတင် ပြောပွဲလေး ၊၊ ရသမျိုးစုံ ခံစားနေရရဲ့ ၊၊
စိတ်တိုင်းမကျတာကတော့ အခုချိန်ထိ သေးသေးလေး တင်ရင်တောင် သည်းညည်း မခံတက်သေးတဲ့ မရင်ကျက် သေးတဲ့ စိတ်တစ်ခုပဲ ၊၊ ဒါပေမယ့်လေ ဟိုးအရင် နှစ်တွေနဲ့ စာရင်တော့ တော်တော်ကို ရင့်ကျက် တည် ငြိမ်နေပြီပြောရမယ် ...........
ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းကြီးလည်း အချောသပ်လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ပြီးဆုံးကာနီးပြီမို့ ဟိုး..အရင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီး အားကောင်း မောင်းသန် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့ စီမံကိန်းလယ် ကာလကာလောက် အလုပ်တွေ သိပ်မရှုပ် တော့ပြီ ၊၊ အနည်း ငယ် အေးအေးလူလူ ရှိလာပြီလို့ ဆိုရပေမပေါ့ ၊၊ ဆိုက်လုပ်ငန်းတွေ ကလည်း ပါးပါးလျလျ နဲ့ လိုအပ်တဲ့ အချော သပ်လုပ်ငန်းတွေသာ ရှိတော့ တာမို့ လူအင်အားလည် လျော့ပါးသွားသလို စက်ကြီးတွေ ၊ ကရိန်းတွေ ၊ ယန္တယား တွေ လည်း နောက်ထပ်စီမံကိန်း အသစ်တစ်ခုဆီကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီမို့ ဟာလာ ဟင်းလင်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်းနဲ့ စီမံကိန်းက လွမ်းမောစရာတောင်ကောင်းနေလေရဲ့ ၊၊
စီမံကိန်း လယ်ကာလ ၊ ဆီတုန်းကတော့ ပွဲတော်အလား ပျားပန်းခတ်မျှ စည်ကားလို့ပေါ့ ၊၊ မနက်အာရုံတက်လို့ ရောင်နီလာပြီ ဆိုသည်နှင့် စက်သံ၊ကားသံ ၊ လူသံ ၊ခေါ်သံ ၊ အော်သံ တွေနဲ့ စည်စည်ညံခဲ့ပေါ့လေ ၊၊ ကျွန်တော် တို့လည်း မနက် ၇-နာရီ ထိုးတာနဲ့ ဆိုက်ထဲရောက်နေကြပြီ ၊၊ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းအတွက် တာဝန်တွေ ခွဲဝေ လို့ စီမံကိန်း ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူနဲ့ မနက်တိုင်း ကွင်းပြင်ထဲမှာ Briefing ယူနေကြပေါ့ ၊၊ နောက်မှ ကိုယ်တာဝန်ကျ တဲ့ အပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းက ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ထပ်ပြီး ညွှန်ကြား ၊ ပြီးမှ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လိုက်စစ်ဆေး လို့ ၊ လုပ်ကြကိုင်ကြပေါ့ ၊၊ ပင်ပန်းပေမယ့် အင်မတန်မှ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသလို ၊ အင်မတန်မှ လည်း ဂုဏ်ယူစရာပေါ့ ၊၊ နောင်တချိန်မှာ ပေါ်ထွန်းလာတော့မယ့် တံတားသစ်ကြီးကို မြင်ယောင်ရင်း ပင်ပန်းတာ တွေ ပြေပျောက် ရပါတယ် ၊၊
အော် ၊ အခုတော့ စီမံကိန်းလည်း ပြီးဆုံးခြင်း ရောက်လို့ အချို့ချို့တွေ လည်း နောက်ထပ် စီမံကိန်းအသစ်ဆီ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့အဖြစ် သွားကြပြီ ၊၊ အလုပ်မရှိတော့တဲ့ အလုပ်သမားအချို့လည်း ပြောင်းကြရွှေ့ကြပေါ့ ၊၊ အခုလို စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ ဟာ ကျွန်တော်တို့လို အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းတွေ အတွက် မထောင်းတာပေမယ့် ၊ နေ့စား အလုပ် သမား လူတန်းစား အတွက်တော့ အင်မတန်မှ ကျပ်တည်းတဲ့ ကာလပေါ့ ၊၊ လုပ်ငန်းကလည်း မလှုိုင် တော့ သလို အလုပ်မရှိဘူးလို့လည်း မဆိုနိုင် ၊ ပြတ်တုန်းလပ်တုန်း ကာလပေါ့ လေ ၊၊ မစဉ်းစားချင် ပါဘူးလေ ၊၊ အခုလို မနက်စောစော မှာ ဒီလိုအကြောင်းတွေ မတွေးလိုပေမယ့် ၊ တားမရဆီးမရ အလိုလို ၀င်လာတဲ့ အတွေး ဆိုးကို ဖြေဖျောက်လို. အားနေတုန်း လမ်းလေးဆင်းလျှောက်ဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ ကျွန်တော့် အိမ်လေးရဲ့ ခေါင်းရင်းဖက် စွေစောင်းစောင်းမှာ ရှိတဲ့ ခရေပင်တန်းလေးတွေ ဘက်ဆီကို ဦးတည်မိပါတယ် ၊၊
ခရေပင်လေးတွေ ဟာ ပင်ပျိုလေးတွေ မို့ အပွင့်တွေ ဝေေ၀ဆာဆာ နဲ့ ရနံသင်းသင်းလေး အမြဲမွှေးနေတက် ပါတယ် ၊၊ လေအဝှေ့မှာ ကြွေကြနေတဲ့ ခရေပွင့်လေးတွေ လည်း မြေပြင်မှာ ဖွေးဖွေးလှုပ်လို့ပေါ့ ၊၊ အဲဒီ ခရေ ပန်း လေးတွေကို နေ့စဉ်မနက်တိုင်း ဗန်းကုံးလေးတွေနဲ့ လာကောက်နေကြ မောင်နှမနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်၊၊ အကြီးမလေး က ၁၁ နှစ်လောက်နဲ့ အငယ်ကောင်လေးက ၈နှစ် လောက်ပေါ့ ၊၊ ဆိုက်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်သမား တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ သားသမီးလေးတွေ နေမှာပါလေ ၊၊ ဗန်းကုံးလေးတွေ အပြည့်အမောက် အမြဲတမ်း ကုန်စင်အောင် ကောက်သွားတက်ကြပါတယ် ၊၊ ကျောင်းဖွင့်ချိန်ပေမယ့် ကျောင်းသွားတာမမြင်တော့ ကျောင်းမနေကြဘူးထင်ပ ၊၊ ဒီလိုပဲ ဆိုက်ထဲမှာ လည်း ဟိုဟာလေးကောက် ၊ ဒီဟာလေးကောက်နဲ့ တွေ့နေရ တက်ပါတယ် ၊၊ ဒီနေ့မနက်မှာတော့ ပန်းကြွေလေးတွေ ကောက်ရုံမက အပင်ကိုပါ လှုပ်ပြီး မကြွေသေးတဲ့ ပန်းလေးတွေကို ခြွေ ယူဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့် " ဟေ့ ခလေးတွေ မင်းတို့ ကြွေတာကိုတင်ကောက် လေ ကွာ ၊ ဘာဖြစ်လို့ မကြွေ သေးတဲ့ ပန်းလေးတွေ ကို ခြွေနေတာလည်း ၊ အပင်မြင့်မှာ ခဏဖြစ်ဖြစ် သဘာဝအတိုင်း နေပါစေကွာ ၊ နောက် နေ့ မနက်တော့ သူ့အလိုလို ကြွေမှာပေါ့ကွာ " ရယ်လို့ ခပ်ငေါက်ငေါက်လေး ပြောမိတော့ ကောင်းမလေးက " ဒီနေ့ အဖေ့ကို ဆေးခန်းပြရမယ် အစ်ကိုကြီး ၊ ဆေးခန်းပြဖို့ငွေလိုတယ် ၊ ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်သူ့အလိုလို ကြွေ တဲ့ထိ စောင့်လို့ မရလို့ပါ " ဆိုတဲ့ မျက်နှာဝိုင်းလေးကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုပြန်ပြောရပါ့မလဲ ၊၊ " မကြွေ ခင်မှာ ဝေနေတဲ့ ပန်းလေးတွေကို သဘာဝအတိုင်း ရှိပါစေကွာလို့ " တားချင် ပေမယ့် သူတို့ကိုယ်တိုင် မဝေခင် မှာ ကြွေနေရတဲ့ ဘ၀လေးတွေ မို့ ကျွန်တော် ဘာများ ပြောနိုင် ပါဦးမလဲ ၊၊ တခါတခါ သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ မဝေခင်မှာ မကြွေစေချင်တဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တခါတရံ ခြွေနေမိလား ရယ်လို့ အမြဲတွေးမိပါတယ် ၊၊
အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ကျောင်းနေရမယ့်အရွယ် အလုပ်သမားလေးတွေကို တွေ့ရ ခိုင်းရတိုင်း လိပ်ပြာမလုံ ခံစားမိတာ အမှန်ပါ ၊၊ ၁၅ - ၁၆ - ၁၇ ဆိုတာ တကယ်တော့ မိဘရင်ခွင်၇ိပ်မှာ နွေးနွေး ထွေးထွေး ခိုလှုံရင်း ကျောင်းပညာ သင်ကြားရမယ့် အရွယ်တော့ပေါ့ ၊၊ အတက်ပညာတစ်ခုကို သင်ကြားနေရ မယ့် အရွယ်တွေပါ ၊၊ ပန်းခလေးတွေ ကြွေမှာစိုးတဲ့ ကျွန်တော် အဲဒီခလေးတွေ အတွက်ရော မကာကွယ် နိုင် တော့ ဘူးလား ၊၊ ကာရာ အိုကေ ဆိုင်မှာ အဲဒီအရွယ် ခလေးမလေးတွေကို ပန်းကုံးစွပ်တာဟာ ၊ ဘောက်ဆူးပေး တာဟာ ချီးမြှောက် လိုက်တာလား ၊ ကြွေမှာစိုးလို့ တံစိုးပေးလိုက်တာလား ၊ ကြွေပြီးသားပါပဲရယ်လို့ နင်းခြေ ပေးလိုက်တာလား ၊၊ မစဉ်းစားတက်တော့ပါဘူး၊၊ အဖေကူလီထမ်းလို့ သားကူလီထမ်းရတယ်ဆိုတာ မွေခံထိုက်စေဆိုတဲ့ ၀တ္တရား ကျေပွန်ခြင်းလား ၊ အဖေလုပ် သူက ၁၀ ပိသာ အလေးကို ထမ်းလို့ သားလုပ်သူက ၁၅ ပိသာ အလေးကို ထမ်း နိုင်တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူ စရာလား ၊၊ အဲဒီသားသမီးကို အတိဇာတ သားရယ်လို့ ခေါ်ဆိုရမလား ၊၊ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင် ၊ အလုပ်ခွင်တွေထဲမှာ မဝေခင်မှာ ကြွေနေရတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေ အများကြီးပါ ၊၊ အဲဒီ ပန်းလေး တွေဟာ အချိန်မတန်ခင် မှာ ပင်ယံထက်က ခြွေချခံခဲ့ရတယ်လေ ၊၊ ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပန်းခလေး တွေကို မဝေခင်မှာ မကြွေစေချင်ပေမယ့် ၊ ကိုယ်ဘာမှ မတက်နိုင်သေးတာမို့ တခါတရံ ကိုယ်တိုင် ခြွေသူမဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်းပဲ ..... မဝေခင်မှာ မကြွေပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးရုံမှတစ်ပါး .........
၀န်ခံချက် ၊၊ ပိုစ့်အဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည် ၊၊